Ukuphupha ngokuhleka Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Kuthiwa kufuneka ubile kwaye uhleke kanye ngemini ubuncinci kanye ngemini ukuze uhlale usempilweni. Ukuhleka kukubonakalisa uvuyo, inzolo, ukonwaba, isivumelwano kunye nokwenza njengokhuthazo. Ukuhleka kukwenza wonwabe, kukhuphe amandla kunye namandla, kwaye kunokubakhulula abantu kuxinzelelo lwangaphakathi.
Nangona kunjalo, ukuhleka kunye nokuhleka akusoloko kunxulunyaniswa nemvakalelo elungileyo kwaye akuyomfuneko ukuba ibe luphawu loburharha. Inokuba nobubi, ibenzakalise, ibe ndlongondlongo, kwaye ibe yintsini, okanye ukuhleka kube yimaski yokuzikhusela yobuhlobo, imbonakalo yobuso beentloni, ukungabi nathemba, kunye nokuphelelwa lithemba. I-clown ehlekisayo yaziwa ngokuba yinto elusizi ngoku.
Jonga iphupha elivela rhoqo ngokunxulumene nokuhleka, emva koko ufunde konke malunga nokutolikwa ngokubanzi.
1 Uphawu lwephupha «ukuhleka» - amaphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
1.1 Hleka nomntu - ukuphupha kunye kumnandi ngakumbi!
2 Uphawu lwephupha «ukuhleka» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «ukuhleka» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «ukuhleka» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukuhleka» - amaphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
Hleka nomntu - ukuphupha kunye kumnandi ngakumbi!
Iimeko zephupha lokuhleka nomntu zithathwa njengophawu oluqinisekileyo noluthembisayo. Ngokwesiqhelo, ibonisa ukonwaba ebomini. Ngaphezu koko, iphupha lokuhleka kunye libonisa ukulinganisela kwangaphakathi; ulele uyahambelana nesiqu sakhe.
Ukuba umphuphi uhleka kunye nomhlobo ephupheni, uya kuthanda nokwabelana ngeemvakalelo ezonwabileyo nalo mntu ngokwenyani. Kwangelo xesha, umfanekiso wephupha ubonakalisa ukuba umntu oleleyo angamthemba lo mhlobo kwimeko yengxaki. Kodwa ukuba uhleka umntu, lumkisa ngokuzikhukhumeza kwakho.
Uphawu lwephupha «ukuhleka» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba umntu uphupha ngokuhleka, kungavulwa. ukungenisa y Iingxaki ukutolika. Ukuqina okwakhekileyo kule meko kukhutshwa okwethutyana ngale ndlela: Oko kukuthi, ngexesha lokulala.
Ukuhleka okuphuphileyo kunokubonisa ukuba ukuphupha akufuneki kuthathe ubomi ngokungathandekiyo. Oku kuyinyani ngakumbi ukuba ephupheni uzibona wena okanye omnye umntu ehleka ihlaya elihlekisayo.
Kuhlalutyo lwamaphupha, makwenziwe umahluko phakathi koluphi uhlobo lokuhleka kwaye kwimeko enjani kuyo:
Ukuba uhleka okanye uhlekisa ngephupha, lo luphawu lokuba uyakoyika ukuhlekisa okanye ukungaziphathi kakuhle, yiyo loo nto ngoku uneentloni. Uva kabuhlungu Ukwala.
Ukuhleka okuhlekisayo kunye okumnandi kuqhelekile uphawu oluhle. Ukubona abanye behleka kunokubonisa ezinye zehlazo ezilindelweyo. Xa usiva abanye behleka, uye ube yintlekisa okanye Schadenfreude zive nabanye. Ukuhleka okungeyonyani kufanekisela amaxhala amakhulu kunokuba abonakalayo. Ukuva ukuhleka okucekisayo kwabanye kuphakamisa ukugula kunye neziganeko ezidanisayo.
Ukutolikwa okungakumbi ukuhleka ephupheni:
Umphuphi uhleka yedwa: Impumelelo kuzo zonke iiprojekthi; omnye uza kuza phakathi kwabantu abonwabileyo
ukuhleka ngokugqithileyo kwinto yangaphandle: ukuphoxeka kunye nokungavisisani kwindalo esingqongileyo
ukuhleka amashwa abanye: abahlobo benzakaliswa ngabom ukwanelisa iminqweno yabo yokuzingca
ukuhleka kwabantwana abonwabileyo, ukuhleka kwabantwana - uvuyo kunye nempilo
umntu omdala omaziyo ohleka: inyani eneentloni ezivela kwixesha elidlulileyo iphinde ivele kuba umntu akakayigqibi ngokupheleleyo.
Uphawu lwephupha «ukuhleka» - ukutolikwa kwengqondo
Kubomi bemihla ngemihla, xa utolika amaphupha, kubalulekile ukuba unikele ingqalelo koluphi uhlobo lokuzonwabisa kunye nokuhleka okukhoyo ephupheni. Ukuba kukho ukuhleka okuqhelekileyo kwiqela, ke unxibelelwano kunye umanyano yomeleza kwiqela.
Ke ngoko, ukuhleka kukuphefumla okukhulula umphefumlo kwaye kunokuthetha ukuba uyifumene indlela yokuphuma kwimeko enokudideka.
Uphawu lwephupha «ukuhleka» - ukutolika kokomoya
Ukuhleka ephupheni kufanekisela ngokwembono yokomoya enye impumelelo ebalulekileyo yokuphupha, ngakumbi xa ezihleka.